jQuery load ကို အသုံးပြု၍ အမျိုးအစားအလိုက်နောက်ဆုံးရေးသားချက်များကို WordPress Menu မှတဆင့်တင်ပါ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 18, 2015 Douglas Karr
အကယ်လို့သင်ကအဲဒီမှာပိုကြီးတဲ့ဘလော့ဂ်အချို့ကိုလည်ပတ်ခဲ့လျှင် Mashableသူတို့မှာအလွန်ကောင်းတဲ့ menu system ရှိတယ်ဆိုတာသင်သတိထားမိမှာပါ။ ပြီးတော့ကဏ္ category တစ်ခုချင်းစီရဲ့နောက်ဆုံး blog blog တွေမှာသင့်ကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ စာမျက်နှာသည်အမြဲတမ်းအသုံးမပြုရန်သေချာစေရန်၊ သူတို့သည် Ajax ကို အသုံးပြု၍ ထိုအကြောင်းအရာကိုဖွင့ ်၍ စာမျက်နှာကိုအပြည့်အဝတင်ပြီးမှသာ ကြိုတင်၍ တင်သည်။
ကျနော်တို့ဒီမှာအပေါ်အတူတူပြုချင်တယ် Martech Zone။ ကျွန်တော်တို့မှာရှိသောအမျိုးအစားများကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိစေရန်တစ်ခုချင်းစီတွင်ရေးသားချက်များကိုပြချင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ WordPress, အ WordPress ကိုကျွမ်းကျင်စွာပါပဲ API ကို နှင့် jQuery သို့သော်ငါဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမတွေ့မှီတိုင်အောင်သာမဟုတ်ခဲ့ပေ jQuery ကိုအသုံးပြုပြီးအမျိုးအစားအလိုက်ပို့စ်များကိုရယူခြင်း ကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုရခဲ့တယ်
သင်ခန်းစာသည်အသုံးပြုသူအားပို့စ်များကိုတက်ကြွစွာဆွဲချရန်ပုံစံတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီး၎င်းကိုတောင်းဆိုခြင်းကိုစတင်နိုင်သောလင့်များကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကိုအဆင့်ဆင့်။ Link အချို့ပြုလုပ်လိုလျှင်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ သို့သော်အမှန်တကယ် WordPress ကို navigation menu တွင်တည်ဆောက်ရန်လိုသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် WordPress ၏ menu link များသည် menu items များထည့်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်နံပါတ်များကိုထုတ်ပေးသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ Ajax ခေါ်ဆိုမှုတွင်သင်ဆွဲယူသွားလိုသောအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့တွင်အမှန်တကယ်သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။
မီနူးစာရင်းအရာများကိုစနစ်တကျတံဆိပ်ကပ်ရန် WPreso မှကုဒ်ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ page / post slug class ကို menu item class သို့ထည့်ပါ.
ပြproblemနာတစ်ခုပဲရှိတယ်၊ စာမျက်နှာအတွက်ဒါမှမဟုတ်စာမူအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အမျိုးအစားအတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပက်ကျိတောင်းခံမှုကိုတောင်းခံခဲ့သည် -
$ ပက်ကျိ = get_cat_slug ($ အိုင်ဒီ);
ပြီးတော့ WPRecipes ကနေ function ကိုထည့်လိုက်တယ်။ WordPress လှည့်ကွက်: အမျိုးအစား ID ကို အသုံးပြု၍ အမျိုးအစားပလပ်ဂင်ကိုရယူပါ, အမျိုးအစားပက်ကျိပြန်ဆွဲထုတ်ရန်အညွှန်းမီထဲကဒေတာ attribute ကိုသို့။
ထို့ကြောင့်… WordPress ဆိုက် ၃ ခု၏ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ jQuery ဂုရုမှအချို့သောညှိနှိုင်းအားထုတ်မှုများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် DK New Media, စတီဖင်ကိုလီ (menu ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်) ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သော submenu စနစ်ရှိသည်။
Tags: အမျိုးအစားပက်ကျိအမျိုးအစားအားဖြင့်နောက်ဆုံးရေးသားချက်များပုဂံခေတ်wordpress Ajax menu ကိုwordpress ajax submenuwordpress မီနူးwordpress nav မီနူးwp_nav_menu
ဇန်နဝါရီ 28, 2013 မှာ 2: 07 AM
ဒီကုဒ်ကိုတစ်နေရာရာမှာပြသသို့မဟုတ်ရောင်းပါသလား။ ငါကအဲဒါကိုအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ Walker နဲ့အတူ wp_nav_menu ထဲဘယ်လိုထည့်သွင်းရမှန်းမသိဘူး။
ဇန်နဝါရီ 28, 2013 မှာ 9: 45 AM
@ facebook-526543707: ငါအသုံးပြုသောကုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ disqus ဘာပြုပြင်မလဲ
ဇန်နဝါရီ 29, 2013 မှာ 4: 57 AM
အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် :) ။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ပထမအမျိုးအစားအတွက်အဆင်ပြေသည်။ သို့သော်ဒီတစ်ခုတည်းအတွက်သာလျှင်အမျိုးအစားခွဲများ (ကျွန်ုပ်၏မီနူး၏အဆင့် ၂) အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သို့ပြန်လုပ်ရမည်ကိုမသိနိုင်သကဲ့သို့၊ ကျွန်တော့်မီနူး: /
4:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 46 တွင်
ငါလုပ်ခဲ့တာက menu element ထဲက data element တစ်ခုကိုထည့်ပြီးအဲ့ဒီ element ကို query ထဲကိုထည့်ပေးဖို့ပဲ။
24:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 42 တွင်
မတ်လ 17, 2015 မှာ 11: 07 AM
ပထမ link ကအလုပ်မလုပ်ဘူး
မတ်လ 18, 2015 မှာ 12: 33 pm တွင်
ငါ link အသစ်ဥပမာတစ်ခုမှ link ကို updated ပါတယ် - ကြောင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့။
ဧပြီ 12, 2021 မှာ 1: 47 pm တွင်
ဟိုင်း! ဒါကငါစီမံကိန်းအသစ်ရှာဖွေနေတာအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ code ကိုမျှဝေဖို့အခွင့်အလမ်း?